भारतसँग एकैपटक सम्भावित ८/१० ओटा बन्दरगाह माग्नुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता भारतसँग एकैपटक सम्भावित ८/१० ओटा बन्दरगाह माग्नुपर्छ
अन्तरवार्ता, मुख्य खबर 81 views
भारतसँग एकैपटक सम्भावित ८/१० ओटा बन्दरगाह माग्नुपर्छ
अशोककुमार टेमानी सभापति, स्थल यातायात तथा पारवहन समिति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानी बारा–पर्साका उद्यमी व्यापारीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । सङ्घको नेतृत्वमा रहँदा मुलुककै आर्थिक विकासका लागि ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को बहुआयामिक अवधारणा ल्याएर चर्चा बटुलेका टेमानी नेपालको वैदेशिक व्यापार र पारवहनको अवस्थाका बारेमा जानकार मानिन्छन् । नेपालको उद्योग र व्यापारले पारवहनका कारण निकै सास्ती खेप्नु परेको बताउने उनी समस्याको निकास हुन नसक्नुमा सरकारी उदासीनता मुख्य कारण देख्छन् । २ दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीका हितका पक्षमा लड्दै आएका टेमानी आर्थिक विकासमा सरकारी दूरदर्शिताको अभावले विकासका आयामहरू सङ्कुचित भइरहेको मान्यता बताउँछन् । प्रस्तुत छ, बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक विकासका अवसर र चुनौतीसँगै पारवहनका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले सामाना गरिरहेका समस्याका विषयमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले टेमानीसँग गरेको कुराकानी :
अहिले नेपालमा पारवहनको समग्र स्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालमा पारवहन राजस्व सङ्कलनको मेरुदण्ड हो । सबैभन्दा बढी राजस्व व्यापारबाट आइरहेको छ । त्यसमा पनि आयातबाट बढी छ । यो पारवहनमा भर पर्छ । तर, यसको सुविधा राम्रो नभएर वैदेशिक र आन्तरिक व्यापारलाई समेत समस्या परेको छ । उद्योग पनि समस्याग्रस्त भएका छन् । बाहिरका देशमा यसमा सुविधा बढेको छ । त्यहाँ लजेष्टिक कम्पनीलाई सुविधा छ । नेपालमा यो शुरू नै भएको छैन । जबसम्म पारवहनलाई प्राथमिकतामा राखिन्न, व्यापार र उद्योग वृद्धि हुँदैन । सरकारको दृष्टिमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने कि नगराउने भन्नेमा मतभेद होला, तर मुख्य एजेण्डा राजस्वलाई बनाएको छ । यसमा त मतभिन्नता होइन । पारवहन प्रभावकारी भए राजस्वमा गुणात्मक रुपमा बढ्छ । सङ्घीयतामा ३ गुणा बजेट चाहिन्छ भनेको छ । तर, ३ गुणा रकम कसरी ल्याउने ? यस्ता पूर्वाधार प्रभावकारी नभई आयको स्रोत सबल हुन सक्दैन ।
जबसम्म पारवहनलाई प्राथमिकतामा राखिन्न, व्यापार र उद्योग वृद्धि हुँदैन ।
पारवहनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता किन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?
यो हुन सक्छ । तर, सरकारले यसमा आवश्यक गृहकार्य नै गरेको छैन । यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय टोली बनाएर सरकारले के गर्ने, निजीक्षेत्रले के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनु पर्छ । जस्तो कि, औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले प्रोत्साहन दिन्छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रमा पनि आकर्षण हुनुपर्छ । निजीक्षेत्र सञ्चालक हो । नीति बनाउने त सरकारले हो । पारवहनमा कुनै ठोस नीति नै छैन । सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जमा छ । तर, रेलबाट बन्दरगाहमा आउनेभन्दा बढी मालसामान रक्सौलमा किन खसिरहेको छ ? यो स्पष्ट नीतिको अभावको उदाहरण हो । बन्दरगाहबाट सरकारले लागतभन्दा बढी आय लिइसक्यो । यो निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । तर, पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छैन । यसका लागि ६५ बिगाहा जग्गा लिने योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ । रक्सौलमा क्लिङ्कर अनलोड बन्द भयो । सिमेण्ट उद्योग करीब बन्द अवस्थामा छन् । राज्य किन उदासीन छ ? तत्काल विकल्पमा जानुपर्ने होइन ? सरकारले दीर्घकालीन नीति पनि आएको छैन । रेलवेलाई कहाँसम्म लैजाने भन्नेमा अध्ययनसम्म भएको छैन ।
रेलबाट बन्दरगाहमा आउनेभन्दा बढी मालसामान रक्सौलमा किन खसिरहेको छ ? यो स्पष्ट नीतिको अभावको उदाहरण हो ।
यसको समाधान कसरी हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ?
यो तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायमा जानुपर्ने हो । यो विकल्प सरकारले दिनु पर्‍यो । सरकारले हामीसँग के गर्ने भनेर सोध्छ । हामीले भनेर के हुन्छ ? भारतले टेर्छ ? यसमा दुवै देशका सरकारले मिलेर समाधान निकाल्नु पर्छ । आईसीपी र बन्दरगाहको बीचमा ठाउँ मिलाउने
कि ? त्यस आसपास व्यवस्था गर्ने कि ? सरकारले भन्नु पर्छ । अल्पकालका लागि भारतसँग छलफल गरेर बस्ती नभएको ठाउँमा मिलाउनु पर्छ । दीर्घकालका लागि आफ्नै देशमा ल्याउनु पर्छ ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा समुद्री बन्दरगाह र भारतीय रेलवेको ढुवानी कस्तो पाउनु भएको छ ?
कोलकाता बन्दरगाहका आफ्नै समस्या छन् । भारतीय पक्षका कुरा क्रमशः समाधान हुन सक्छ । आज विशाखापत्तनम्को कुरा छ । भोलि अन्य पोर्ट पनि आउने कुरा छन् । यसको निराकरण हुन सक्छ । तर, नेपालभित्रको समाधान नभए के हुन्छ ? सरकार यसमा गम्भीर छैन ।
विशाखापत्तनमको निकै कुरा हुन्थ्यो । तर, सञ्चालनमा आएपछि उपयोगितामा निजीक्षेत्र किन पछि हटेको ?
हामीले भारतसँग माग्न नजानेको हो । सुरुमा त कोलकातामात्र सीमित थियो । व्यापारको दायरा पनि कम थियो । तर, अहिले एउटामात्र पोर्ट किन माग्ने ? सबै पोर्ट किन प्रयोग गर्न सक्दैनौं ? एउटाकै प्रक्रियामा ५ वर्ष लाग्छ । यस्तोमा एकै पटक सम्भावित ८/१० ओटा पोर्ट किन
नमाग्ने ? यसबाट भारतलाई केही समस्या छैनजस्तो लाग्छ । विशाखापत्तनम् माग्दा धाम्रा पनि मागेको भए हुन्थ्यो । पूर्वी देशबाट आउने कार्गोका लागि विशाखापत्तनमदेखि कोलकाता ठीक छ । तर, ६० प्रतिशत पूर्वबाट आए पनि मध्यपूर्व र पश्चिमबाट आउँदा पश्चिमका पोर्ट छैनन् । श्रीलङ्का हुँदै घुमेर कोलकाता आउन १५ दिन लाग्छ । पश्चिमी पोर्ट पाएको भए समुद्री भाडा कम हुन्थ्यो । यसमा सरकारले गृहकार्य गरेको छैन ।
यसमा तपार्इंहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण किन गराउनुहुन्न ?
प्रत्येक ६ महीनामा सरकार फेरिने अवस्थामा कसकसलाई भन्ने ? यसका लागि स्थायी प्रकृतिको बोर्ड बनाउनु पर्छ । त्यसले निजीक्षेत्रसित छलफल गरोस् । अहिले त सरकारले निजीक्षेत्रसित वर्षमा २/४ पटक बैठकको कर्मकाण्ड पु¥याउने कामबाहेक अरू केही गरेको छैन ।
सरकारी योजनामा त पारवहनमा पूर्वाधारलाई प्राथमितामा राखेको देखिन्छ । तपाईं कसरी सरकारलाई गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुहुन्छ ?
योजना त बनेको हुन्छ । बजेटमा हेरौं, न्यून परिमाणमा विनियोजन भएको पनि खर्च भएको छैन । प्रत्येक वर्ष यस्तै समस्या छ । यो गृहकार्यको अभावको परिणाम हो । अहिले द्रुतमार्ग सेनालाई दिइएको छ । कम्तीमा यो राजनीतिबाट बाहिर आयो । त्यस्तै अरू आयोजनालाई पनि राजनीतिबाट बाहिर ल्याए अघि बढ्छ ।
यस्ता योजनामा निजीक्षेत्र किन आउन नचाहेको ?
सरकार र निजीक्षेत्रबीच साझेदारी हुन पाएको छैन । निजीक्षेत्र नाफाका लागि लगानी गर्छ । सरकार र निजीक्षेत्रमा एकअर्कामा विश्वास छैन । निजीक्षेत्र तयार छैन भन्ने होइन । सक्षम पनि छ । निजीक्षेत्रले यत्रा बैङ्क र उद्योग चलाउन सक्छ, यस्ता योजना किन सक्दैन ? एउटा सरकारले ल्याएको योजना अर्काले ओझेलमा पारेका छन् । सरकारले गृहकार्य गर्दैन । कुन क्षेत्रमा सरकार जाने र कुन क्षेत्रमा निजीक्षेत्र जाने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ ।
समुद्री भाडा र सिपिङ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने जरीवानामा पनि आयातकर्ताको गुनासो रहने गरेको छ । समाधानमा पहल किन कमजोर देखिएको हो ?
यी सबै कुराहरु पारवहनसँग सम्बन्धित छन् । यो किन लाग्यो त ? यो पारवहन सुविधा अद्यावधिक नभएकाले भएको हो । सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा कसरी भित्र्याउने ? उनीहरुले कोलकतामा बसेर काम गरेका छन् । यहाँ पनि किन नगर्ने ? यसमा सरकार गम्भीर देखिन्न । हामीले बारम्बार भनेका छौं ।
केही कम्पनीले त वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्मै मालसामानको ढुवानी पनि दिइरहेका छन् नि ?
यस्तो पनि छ, तर उनीहरूले सबै खर्च जोडेर लिएका छन् । सीआईएफ वीरगञ्जको अवधारणा भनेको भारतीय पोर्टको खर्च शून्य हुनु पर्छ भन्ने हो । कोलकातामा मालसामानको स्क्यानमात्र हुनु पर्छ । बिलभन्दा फरक नभए वीरगञ्ज पठाउनु पर्छ । अब चाँडै आईसीपी सञ्चालन हुने भएको छ । कोलकाता वा अन्य कुनै पोर्टमा हुने प्रक्रिया अब वीरगञ्जमा हुनु पर्छ । कोलकाताको ह्याण्डलिङ शून्य भएपछि सिपिङ कम्पनी स्वतः यहाँ आउँछ । जुनबेला नेपालमा पूर्वाधार थिएन । त्यतिबेलाका लागि ठीकै पनि थियो । तर, नेपाल आउने कार्गोमा यति धेरै औपचारिकता किन ? सरकारले यसमा कुनै पहल प्रयास गरेको छैन ।
कोलकाता वा अन्य कुनै पोर्टमा हुने प्रक्रिया अब वीरगञ्जमा हुनु पर्छ । कोलकाताको ह्याण्डलिङ शून्य भएपछि सिपिङ कम्पनी स्वतः यहाँ आउँछ ।
तर, आईसीपीको सञ्चालनमा अनपेक्षित अलमल देखिएको छ, निजीक्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ ?
यसले हाम्रो व्यापार महँगो भइरहेको छ । अतिरिक्त खर्च बढिरहेको छ । आईसीपी सञ्चालन भएको भए सिमानामा उभिएर खर्च तिर्ने अवस्था हुने थिएन । अरूलाई दोष दिएर हुँदैन । आफ्नै सरकारको कमजोरी हो । आफू केही नगर्ने अरूलाई दोष दिएर हुन्छ ?
पारवहनका दृष्टिले रणनीतिक पूर्वाधारको प्रबन्धका लागि के गर्नुपर्ला ?
२५ वर्ष पहिला वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले सुक्खा बन्दरगाहको अवधारणा सार्नुअघि सरकारलाई यसबारेमा थाहा थिएन । पछि अध्यनन भयो, बन्दरगाह बन्यो । यसबाट व्यापारमा सहजीकरण त भएको छ नि । सरकारले निजीक्षेत्रको सुझावमा राम्रो काम ग¥यो । भविष्यमा पनि सरकारले निजीक्षेत्रसित सहकार्य गर्नुपर्छ । यसले फाइदा नै गर्छ । मितव्ययिता भए त्यसको प्रभाव उत्पादनको लागतमा पर्छ । मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक कोरिडोरमा रेलमार्ग विस्तार गर्नुपर्छ । अहिले वीरगञ्जबाहेक अन्य रेल सेवा उपलब्ध छैन । यसलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु पर्छ ।
तपाईंले अघि सारेका ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा किन ओझेलमा पर्‍यो । यसको औचित्य सकिएको हो ?
होइन, यसले सबैमा तरङ्ग ल्याएको थियो । सरकारको आँखा खोल्न कम गर्‍यो । रचनात्मक सोच आयो । वीरगञ्ज अहिले महानगर भएको छ । ती कुरा त्यसैमा आएको छ । यसले ग्रेटर वीरगञ्जको आधार निर्माण भएको छ । यसमा अन्य कुरा महानगरमा थपिनु पर्छ । महानगरका मेयरले पनि यसलाई अनुशरण गर्छु भन्नुभएको छ । यी कुरा अचानक आएका होइनन् । बुद्धिजीवी र अर्थविज्ञको मन्थनबाट आएको हो । गति त कुनै पनि विकासको गति यस्तै छ । फाष्ट ट्र्याकको कुरा हुन थालेको १५ वर्ष भइसक्यो । आईसीपी ७ वर्ष भयो । ग्रेटर वीरगञ्ज एउटा परिकल्पना हो । पूर्णता पाउन समय लाग्छ ।
हाम्रो व्यापार महँगो भइरहेको छ । आईसीपी सञ्चालन भएको भए सिमानामा उभिएर खर्च तिर्ने अवस्था हुने थिएन ।
उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
विगतमा वीरगञ्जमा राजनीतिक समस्या भयो, त्यो राज्यको कमजोरीले भएको हो । त्यसमा राज्य दोषी छ । १० वर्ष पहाडमा माओवादीको नाममा समस्या भयो । त्यो कुरा किन हुँदैन ? वीरगञ्जलाई मात्र किन लक्षित गरिन्छ ? आन्दोलनबाट पक्कै असर भयो । तर, अब यस्तो समस्या नआओस् भनेर सरकार कटिबद्ध हुनु पर्छ । सरकारले आत्मसमीक्षा गर्ने कि आरोप लगाउने ? वीरगञ्जको सम्भाव्यता राम्रो छ । यहाँबाट व्यवसाय बाहिर गएको होइन । बरू यहाँका व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अन्त पनि विस्तार हुने मौका पाए । एक ठाउँमा केन्द्रित भएर हुँदैन भन्ने भयो । वीरगञ्जको भविष्य त भौगोलिक वरदान नै हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजार काठमाडौं हो । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य भनेको वीरगञ्ज हो । यसलाई कसैले ओझेलमा पार्न सक्दैन । द्रुतमार्ग बनेपछि अझ सम्भाव्यता बढ्छ । वाणिज्य, उद्योग र पारवहनमा वीरगञ्ज कहिल्यै पछि पर्दैन ।
समग्र उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन नेपालमा हुनु पर्छ । आन्तरिक र बाह्य बजारमा केन्द्रित २ खालका उत्पादन हुन्छन् । धेरै देशले उच्च प्रविधिमा बाहिर निकासी गर्छन् । यस्ता देश धेरै छन् । हामीसँग प्रविधि छैन । सरकारले यसमा साझेदारीका लागि प्रक्रिया बनाएको छैन । भारतमा निकासी सजिलो छ । भारतसित किन प्रविधिमा साझेदारी नगर्ने ? पूर्वाधार बनाउने काम त सरकारले गर्ने हो नि ? सबै निजीक्षेत्रले नै गरोस् भनेर हुँदैन । न्यूनतम आवश्यकता त सरकारले पूरा गर्नु पर्छ । विदेशको सबै उद्यम नेपालमा आउन सक्ने, तर नेपालको अन्त किन जान नसक्ने ? नेपालका कम्पनी बहुराष्ट्रिय किन बन्न नसक्ने ? बाहिर लगानी जानु भएको बाहिरिनु होइन, त्यो त कमाएर ल्याउने बाटो हो । यो सरकारले बुझेको छैन । सक्षमलाई बाहिर जान दिनु पर्छ । यस्ता नीति निर्माणमा पर्याप्त छलफल गर्नु पर्छ । विकासका लागि दृष्टिकोणको अभाव छ । पैसाको कमी होइन । भारतमा नरेन्द्र मोदीले बुलेट टे«नमा जापानको लगानी कसरी भित्र्याए ? त्यो दूरदृष्टिको उपज हो । तर, नेपालको निजगढ विमानस्थलमा कोरियन कम्पनीले ५ वर्षमा निर्माण गर्ने मोडेल बनायो, काम भएन किन ? विकासलाई राजनीतिले गलत दिशातिर निर्देश गरिरहेको छ ।
नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले कस्ता अपेक्षा राखेको छ ?
तीनै तहमा सरकारले पूर्णता पाएको छ । धेरै कुरामा निजीक्षेत्रसित सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । पारवहनको विकास नभई अन्य विकासका कल्पना पूरा हुँदैन । कूटनीतिलाई चुस्त र सापेक्ष बनाउनु पर्छ । विकासको अवधारणा फराकिलो गर्नु पर्छ । हामीले हाम्रा प्राथमिकता सार्वजनिक बहसका लागि ल्याउनु पर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । शक्तिमा जानेबित्तिकै व्यक्तिगत कुरा हाबी भएर राष्ट्रिय आवश्यकता ओझेलमा पर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु पर्दछ । सरकारले विकासका लागि गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ । अब विकासमा एकोहोरिनु पर्छ । उत्तम गृहकार्य गरेर निजीक्षेत्रसित सहकार्य जरुरी छ ।